Aveco iyo Spectra Logic Isku-darka Awoodda Ingin-ilaa-Dhammaadka Kaydinta Xallinta Shaqo Shaqo | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » content Management » Aveco iyo Spectra Logic Isku-darka Awoodda Dhammaadka-ilaa-dhamaadka Ingest si loo Xaliyo Xalka Shaqada
Si buuxda isugu dhafan Aveco ASTRA MAM iyo Spectra Logic BlackPearl ayaa siiya maareyn aan kala go 'lahayn oo mug weyn oo ah waxyaabaha ku jira warbaahinta
Aveco®, oo ah shirkadda ugu weyn ee madax-bannaanida warshadaha ee warbaahinta, iyo Spectra Logic®, oo ah hoggaamiye keydinta xogta iyo xallinta xogta, ayaa maanta si wada jir ah u shaaciyey maamul dhammaystiran oo maareynta hantida warbaahinta ah (MAM) iyo xalka kaydinta, kaas oo si buuxda loo tijaabiyey, la caddeeyey hawada saara.
Iyada oo ku saleysan Nidaamka Kaydinta ee Aveco ASTRA MAM iyo Spectra® BlackPearl®, adeegsadayaashu way maamuli karaan oo ilaalin karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin si aan kala go 'lahayn - laga bilaabo infekshinka illaa wax soo saarka illaa iyo keydinta iyo qaybinta. Maareynta Lifecycle, tier otomaatiga ah iyo isku xirnaanta daruuraha ayaa u oggolaaneysa isticmaaleyaasha dhammaadka inay maareeyaan kharashka isla markaana ka faa'iideystaan ​​adeegyada daruuraha halka ay macno u leedahay.
"Iyadoo Spectra BlackPearl ay si habsami leh u dhexgaleyso qulqulka socodka maaraynta maareynta (oo ay ku jiraan keydka) xalka Aveco ASTRA MAM, isticmaaleyaashu hadda si toos ah ayey u baari karaan una soo celin karaan hantida iyadoon loo eegin nooca keydka ay ku nool yihiin, ha ahaato horudhac ama daruuraha gudaha MAM," ayuu yiri Hossein ZiaShakeri, Spectra Logic Madaxweyne Ku Xigeenka Sare ee Horumarinta Ganacsiga iyo Isbahaysiga Istiraatiijiyadeed. "Tani waa xalka ugu fiican ee ururada warbaahinta ee raadinaya keyd la awoodi karo oo la cabbiri karo oo ku saleysan heerarka furan ee cajaladda, qalabka wax lagu keydiyo ama daruurta, si loo hubiyo in waxyaabaha ay ka kooban yihiin ay ka sii fiicnaan doonaan keydkeeda."
Asal ahaan, ASTRA MAM waxay siisaa xog-ururin guud iyo qalab guud dhammaan codsiyada ASTRA. Haysashada dhammaan qalabka si adag oo isku dhafan hareeraha nidaamka maareynta hantida warbaahinta guud waxay awood u siineysaa kharashyada hoose, isdhexgalka wanaagsan, iyo socodka shaqada ee fudud. BlackPearl wuxuu siiyaa marin casri ah, marin fudud qaab dhismeedka keydinta heerar kala duwan wuxuuna si buuxda u dhexgalaa xalka Aveco ASTRA MAM oo u oggolaanaya raadinta tooska ah iyo soo celinta hantida.
(dhagsii sawirka ama halkan qaabka xallinta sare)
"Hadafkeena koowaad ee aan la leenahay ASTRA MAM waa in aan siino barxad udub dhexaad u ah dhamaan waxyaabaha loo isticmaalo wax soo saarka iyo xakamaynta maaraynta iyo in la siiyo hawl wadeenada qaab fudud oo awood leh oo lagu fuliyo howlaha maalinlaha ah," ayuu yiri Pavel Potuzak, oo ah agaasimaha Aveco. "Isdhexgalka Spectra BlackPearl wuxuu ku dhismayaa hadafkan adoo ku daraya keydinta xoogga leh ee la cabbiri karo si loo helo xal dhammaystiran oo lagu cuno-to-archive."
Aveco, oo fadhigeedu yahay Czech Republic, Mareykanka, India, Russia iyo Thailand, waxay naqshadeeyaan, iibiyaan, oo taageeraan otomatiyada wax soo saarka istuudiyaha, otomatiga maaraynta otomaatiga, iyo nidaamyada iswaafajinta kanaalka ee adduunka oo idil. Noocyo kala duwan oo qaabdhismeedyo ah ayaa laga heli karaa, laga bilaabo kanaallo fara badan oo isku dhafan, hawlgallo goobo kala duwan ah illaa nidaamyo keli keli keli ah leh, iyo dhammaystirka dhammaadka illaa dhammaadka iyo tas-hiilaadka ciyaarta ilaa alaabada shaqsiyeed. In ka badan 300 oo macaamiil ah oo ku kala nool Yurub, Ameerika, Aasiya, iyo Afrika, Aveco waxay leedahay tiknoolajiyad iyo waayo-aragnimo ay ku gaarsiin karto shaqo kasta, si ay u xakameyso aaladda saddexaad, iyo inay u siiso shirkadaha warbaahinta kalsoonida iyo taageerada 24-ka saac ee Aveco waa la yaqaan. loogu talagalay Sannadkii 2019, shirkadda waxaa la siiyay Abaalmarinta 'IBC Innovation Award' ee qaybta Mawduucyada Meelkasta oo loogu talagalay shaqadooda otomaatiga ah ee ETV Bharat ee nidaamka otomatiga ah ee kaxeeya istuudiyooyinka 24 iyo kanaalada wararka 24 ee waqtiga buuxa ee 13 luqadood oo loogu talagalay isticmaalka wararka moobiilka. Tan iyo markii la aasaasay 1992, Aveco waxay ahaatay mid xasilloon, shirkad gaar loo leeyahay oo leh ballanqaad muddo dheer ah oo ku saabsan koritaanka joogtada ah iyo taageerada waqtiga.
Hadday tahay war baahin, kanaalka guud ee madadaalada, kanaalka muusikada, ama ururada wax iibsiga ee TV-ga, Aveco waxay ka caawisaa shirkadaha warbaahinta inay noqdaan warshaddo wax soo saar leh, inay soo saaraan, maareeyaan, oo ay u gudbiyaan waxyaabaha sida saxda ah loogu kalsoonaan karo, si hufan, iyo saameynta ugu badan.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.aveco.com, adoo soo diraya email [emailka waa la ilaaliyay], ama adoo wacaya xarunta dhexe ee Prague + 420-235-366-707, xafiiskayaga New Delhi + 91-989-901-1397, xafiiska Bangkok +66 (0) 828 170 113, ama noo Los Angeles xafiiska + 1-818-292-1489.
Spectra Logic waxay soo saartaa keydinta xogta iyo xalalka maareynta xogta ee xaliya dhibaatada haysashada dhijitaalka ah ee muddada-dheer ee ururada la tacaalaya koritaanka xogta jibbaarran Waxaa loogu talagalay oo keliya hal-abuurnimada kaydinta in ka badan 40 sano, Spectra Logic wax soo saarkiisa aan macquul ahayn iyo diiradda macaamiisha waxaa lagu caddeeyay ansaxinta xalalkeeda hoggaamiyeyaasha warshadaha badan ee adduunka. Spectra wuxuu awood u siinayaa in la awoodi karo, keydinta xogta tobaneeyo sano iyo helitaan iyadoo la abuurayo habab cusub oo lagu maareeyo macluumaadka dhammaan noocyada keydinta-oo ay ku jiraan keydka, keydinta, keydinta qabow, daruuraha gaarka loo leeyahay iyo daruuraha dadweynaha. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, booqo www.spectralogic.com/.
Previous: Farshaxanka Farshaxanka ayaa soo galay xillikiisii ​​9aad Koonfurta Florida PBS!
Next: Nidaamyada TAG Video waxay ku guuleystaan ​​xaaladda Wada-noolaanshaha Teknolojiyada AWS, waxay siisaa macaamiisha xitaa marin-u-hel ballaaran iyo dabacsanaan si loo geeyo codsiyada baahinta